Eyona nto ithengwayo ibeka iChromecast 3 kwintengiso ngaphambi kokuba ithiwe thaca ngokusemthethweni | I-Androidsis
Enye yezixhobo esele ibe phantse ukuthenga okunyanzelekileyo kubasebenzisi abaninzi abafuna ukonwabela umxholo wezixhobo zabo eziphathwayo okanye ithebhulethi kwiscreen esikhulu sekhaya labo yiChromecast, isixhobo esisinika amanqaku amnandi ngexabiso eliphantsi kakhulu.
Ngo-2015, uGoogle wazisa isizukulwana sesibini sesi sixhobo, sisixhobo sayo sasingazi nto kwaphela malunga nokuhlaziywa kwayo okunokwenzeka, ngokuyinxenye kuba kuncinci okanye akukho nto inokongezwa kwesi sixhobo, kuba ukuba sifuna ukudlala umxholo kwi4K, uGoogle usinika iChromecast Ultra.
Isizukulwana sesithathu seChromecast siza kuboniswa ngo-Okthobha u-9, kunye neePixels, kodwa sele ifumaneka kwiivenkile ze-Best Buy e-United States, okanye ubuncinci. Umsebenzisi weReddit uthumele amava akhe kwivenkile ethengwayo yokuthenga iChromecast. Kuyabonakala ukuba lo msebenzisi ukhuphe isixhobo ezishelfini naxa esiya kuhlawula, ikhowudi ayibhaliswanga kwinkqubo, Ukunyanzelisa umphathi wecashier ukumakisha njengeChromecast yesizukulwana sesibini. Kwifoto engasentla, sinokubona ukuba i-Chromecast ijongeka kanjani isizukulwana sesibini nesesithathu.
Umsitho uGoogle acwangcise ukuwubamba ngo-Okthobha 9, ukongeza ukwazisa ngokusesikweni iGoogle Pixel 3 kunye nePixel 3 XL, Siza kusibonisa iGoogle Hub, isithethi esikrelekrele nescreen, apho isigebenga sokukhangela sifuna ukuba silawule kungekuphela nje izinto ezizenzekelayo ekhaya, kodwa sisebenzise njengeziko lokonwabisa ekhitshini.
Ngo-Okthobha i-9, ukusuka kwi-Androidsis siza kuyimamela yonke into eyenzekayo kwinkcazo kaGoogle ndikubonise zonke iindaba, eya kuthi ifike kwintengiso kungekudala kwi-giant search, nangona singalindela okuncinci malunga neGoogle Pixel 3 kunye nePixel 3 XL, kuba phantse lonke ulwazi olunxulumene nesi sixhobo sele lwaziwa ngenxa yenani elikhulu lokuvuza kunye nokuphononongwa kukhutshwa ngokungekho semthethweni kukhutshwe kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » Eyona nto ithengwayo ibeka iChromecast 3 kwintengiso ngaphambi kokuba ithiwe thaca ngokusemthethweni